दु’खको खबर !! को’रोनाले लियो एकै परिवारका ३ जनाको ज्या’न – AB Sansar
October 14, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on दु’खको खबर !! को’रोनाले लियो एकै परिवारका ३ जनाको ज्या’न
को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणबाट तनहुँमा एकै परिवारका तीन जनाको ज्या’न गएको छ। एक सातामै बाबु र दुई छोराको नि धन भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, तनहुँका अनुसार भीमाद नगरपालिका ६ का धर्मकुमार श्रेष्ठ र उनका दुई छोराको को रोनाबाट नि धन भएको हो। को रोना संक्रमित ९८ वर्षीय धर्मकुमारको आइतबार काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा निध न भएको थियो।
उनी बिरामी भएपछि चितवन मेडिकल कलेज लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं लगिएको थियो। यस अघि को रोना सं क्रमणबाट उनका साइला छोरा बिष्णुकुमार श्रेष्ठको असोज १८ गते नि धन भएको थियो। त्यस्तै, माइला छोरा कृष्णकुमार श्रेष्ठको असोज २४ नि धन भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
उनको परिवारका अन्य चार जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनकी पत्नीको काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै, जेठा छोरा रामकुमारको काठमाडौंकै ह्याम्स अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ।त्यस्तै, रामकुमारकी बुहारीमा पनि कोरोना देखिएको छ। उनी होम आ इसोलेसनमा छिन्। रामकुमारका कान्छा छोरा अमृतमा पनि को रोना देखिएको थियो।
उनी भने असोज १७ गते को रोनामुक्त भइसकेका छन्। रामकुमारलाई उपचारका लागि चितवन मेकिडल कलेज लग्दा को रोना संक्रमण फैलिएको आफन्तजनको भनाइ छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चितवन जानुअघि उनको परिवार तथा गाउँका कुनै पनि व्यक्तिमा कोरो ना सक्रमण देखिएको थिएन्। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
खु’सिको खबर : नेपालमा एकै’पटक खु’ल्यो ३८ हजार जनाका लागि जा’गिर !
निषेधाज्ञा साउन १० सम्म लम्ब्याइयो, उपत्यका बाहिरबाट आएका सार्वजनिक सवारीलाई प्रवेश खुकुलो
फेरि आयो दुखद खबर 😥😥शनिबार बिहान ४५ वर्षीय पुरुषलाई बाघले लग्यो? निकुञ्जको टोलीद्वारा खोजी सुरु